We focus on building new materials and innovative technology,applied to packaging &printing fields. We established our standards for design ,packing, proofreading, ပုံနှိပ်, binding and logistics standard; we had the top-ranking professional printing processing machinery equipment;we combined the most excellent printing enterprise, established the best cooperation with them.So,choose us ,you choose the most professional & experienced manufacturer.
ပုံနှိပ်ခြင်း Offset ပုံနှိပ်ခြင်း:CMYK,Pantone Maximize6အရောင်များ
Types of corrugation Amount of corrugation / 30စင်တီမီတာ Height of corrugation
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံanရိယာဖုံးလွှမ်း 5600 စတုရန်းမီတာ, အဆင့်မြင့်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပထမတန်းစားနည်းပညာအင်အားများတပ်ဆင်ထားသည်, ကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည် 100 အလုပ်သမားများ, ၏စီမံခန့်ခွဲမှုန်ထမ်းများ 15 လူများ, 20 နည်းပညာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ. ကျနော်တို့အနည်းဆုံးထောက်ပံ့3ရေကြောင်းမတိုင်မီကြိမ် QC.
2. Bundled by brown craft paper; pallets နှင့်အတူ